Chiba | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » Chiba
Updated: 2016-07-07 16:27
ခါတိုရိ ဂျင်းဂု ( ခါတိုရီ နတ်ဘုရားကျောင်း )
ခါတိုရိ ဂျင်းဂု ( ခါတိုရီ နတ်ဘုရားကျောင်း) သည် ချိဘ ခရိုင် ခါတိုရိ မြို့ ခါတိုရိ ရပ်ကွက်မှာ တည်ရှိ သော နတ်ဘုရားကျောင်း တစ်ဆောင် ဖြစ်ပြီး ၊ ဂျပန် ခန်းတို ( အရှေ့ပိုင်း ) ခါတိုရီ နတ် ကျောင်း တို့ ရဲ့ ပင...
Updated: 2016-07-05 17:02
ချိဘ ခရိုင် ကျွန်ဆွယ် ရွာကလေး
ဘိုစိုး ကျွန်းဆွယ် ရွာ ကလေး မှာကတေ့ာ အယ်ဒိုခေတ် က နေ မဲဂျိ ခေတ် အတွင်း က အိမ် တန်းလျားလေး တွေ က တန်း စီနေသယောင် ၊ လယ်ကွင်းတွေ ၊ လယ် ကွက် တွေ နဲ့ သဘာဝ ပန်ဝန်း ကျင် ရှု ခင်း တို့ က အရင် တုန်း က ဂျပန် နိ...
Updated: 2016-07-05 15:49
နာရီတာ နိုင်ငံတကာလေဆိပ် ( ချိဘ ၊ ဂျပန် )
နာရီတာ နိုင်ငံတကာလေဆိပ် ဟာ ဆို ရင် ချိဘ ခရိုင် နာရီတာ မြို့ ရဲ့ နန်းတိုး အပိုင်း ၊ စန်းရိဇုက ရက်ကွပ် မှာ တည် ရှိ တဲ့ နိုင် ငံ တကာ လေဆိပ် ကြီး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တိုကျိုဧရိယာ တ၀ိုက် ကို အ၀င်အထွက်...
Updated: 2016-07-05 15:33
ချောရှိ ဆိပ်ကမ်းမျှော်စင် တာဝါ ( ချိဘ ၊ ဂျပန် )
ချောရှိ ဆိပ်ကမ်းမျှော်စင် တာဝါ ဟာ ရှားပါးသော အမွှာညီနောင် တာ ၀ါ တစ် ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ချောရှိ ဆိပ် ကမ်း ရှေ့ မှာ တည်ရှိ ပါတယ်။ တာဝါ က ပြောရလောက် အောင် မမြင့် ပေမယ့် ပတ်ပတ်လည် မှာ မြင်ကွင်း ပိတ် ဆို့ ထားခြင...
အပနျးဖွစေကျမှုလကျမှုလုပျငနျးရှငျမြားMichinoeki (Roadside Station)
Updated: 2016-07-05 15:04
Mihama Garden (မီဟာမ ပန်းခြံ ) ချိဘ ၊ ဂျပန်
ခရိုင် ပန်းခြံ ကြီး ရဲ့ အလည် ဗဟိုတည့်တည့်မှာ တည်ရှိပြီး တည်ငြိမ်နေသော အသွင်အပြင်ဆောင်နေတဲ့ ကန်ရေပြင်ကို ပတ်လည် ၀န်းထား တဲ့ ပန်းခြံ ကြီး ။ ထို ပန်း ခြံ ကြီး ဟာ အကျယ် ၁.၆ ဟတ်တာ ရှိ တဲ့ ဥယဉ် အတွင်း မှာ သ...